လူပျိုရည်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် – Grab Love Story
အောက်ဆင်းဖို့ထတော့ ကျွန်တော် မသီတာရဲ့ မျက်နှာကိုစေ့စေ့မကြည့်ရဲဘူး အရမ်းကိုမျက်နှာပူနေတယ် ။ စားသောက်ရင်း အမ တို့ကမေးတယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့ … ကျွန်တော် ကားမူးနေတာလို့ ပဲဖြေလိုက်တယ် စကားများများမပြောရဲဘူး ။ နောက်….. စားသောက်ပြီးတော့ ကားပေါ်လူတွေအကုန်ကားပေါ်ပြန်တက်လာတယ် ။ ကားကြီးဆက်ထွက်လာတော့ လူတွေက စစခြင်းတော့ ဆူဆူညံညံပေါ့… မကြာပါဘူး ခဏနေတော့ အရင်လို ပြန်တိတ်ဆိတ်သွားတယ် ။ အဲ့တော့မှ မသီတာ တစခန်းဆက်လာတယ် ……… ကျွန်တော် ရိုးရိုးပဲ ထိုင်နေတာပါ ဒါပေမယ့် သူ့က လက်ချင်းလာကိုင်ပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်လက်တင်ပေးတမယ် …… သူ့ စိတ်ထဲ ကျွန်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဆော့နေတယ်ထင်တာပဲ ။ သူ့ ထမီကို အပေါ်ထိ ဆွဲမပြီး ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ပေးတယ်…. ပေါင်ထွားထွားကြီးတွေ ထဲမှာ ပင်တီလေး အရည်တွေရွဲနေတယ် ။ ပထမ ကြောက်တယ်….နောက် ရှက်တယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော့ကို အရှက်အကြောက်ထက် ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှု့က ဦးဆောင်သွားတော့တယ် ။ သိချင်စိတ်နဲ့ စူးစမ်းချင်တာရော မသိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှု့တွေရော ရင်ထဲမှာလုံးထွေးနေတယ် ။ နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာဆို သူ့အထဲ လျှောက်ကိုင်ကြည့်တယ် သူလဲရသလောက် ပေါင်ဖြဲပေးထားတယ် ။
အဲ့မှာ… သူပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လှည့်လာတယ်…. ” ငယ်လေး မလိုက်သွားဘူးလား ” တဲ့ ” မဟုတ်ဘူး တမင်ပြန်လာတာ မကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ ” ဆိုတော့ ” သူက လူလည်လေး ပဲ” တဲ့ …..။ ကျွန်တော် သူ့ပေါင်ကြားထဲ တန်းစမ်းလိုက်တယ် ( ကိုင်လက်စ ရှိနေပြီကိုး ) သူက ကျွန်တော့ကို လှမ်းဖက်တော့ ၂ ယောက်သား ကြမ်းပြင်မှာပဲ လုံးထွေးသွားတယ် ….. နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အနမ်းတွေ ကျွန်တော့ဆီအဆက်မပြတ်ကျလာတယ် ။ မိန်းမ တယောက်ရဲ့ ရမက်ဆန်ဆန်ပထမဆုံးအနမ်းပါ ….. ငယ်သေးတော့ ဦးမဆောင်နှိုင်ဘူး သူ့ ဦးဆောင်မှု့နောက်ကိုပဲ ကိုယ်ကပါသွားတယ် ။ ကျွန်တော့လို အရိုင်းတယောက်အတွက် သူ့အနမ်းတွေ အရမ်းကြမ်းလွန်းတယ် … ကျွန်တော့ နှတ်ခမ်းတခုလုံး မြုတ်နေသလိုပဲ တချက်တချက် သူ့လျှာကြီး ပါးစပ်ထဲဝင်ဝင်လာတယ် ။ အသန့်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော် အဲ့အချိန်ရွံရမှန်းမသိဘူး….။ သား မနမ်းတတ်ဘူးပြောတော့ သူက သူနမ်းသလို လိုက်နမ်းပေးတဲ့ ။ နောက် သူ ကျွန်တော့ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် မြန်မြန်လာ နင့်အမပြန်လာရင်တွေ့သွားလိမ့်မယ်တဲ့ သူလဲ ထမီကို ချွတ်လိုက်တယ် ….. ပင်တီက ၀တ်မထားဘူး ။ ဖရောင်းတိုင်အလင်းက သိပ်တော့မရှင်းဘူး…. ဒါပေမယ့် ပေါင်ကြားထဲ မဲမဲကွက်ကွက်ကြီးတော့ တန်းမြင်နေရတယ် ။ နောက်ပြီး သူ့ အပတ်ထဲက ကျတဲ့ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့တွေ တထောင်းထောင်းထနေတယ် ။